Ihowuliseyili bamboo yezihlangu eziphathekayo enamavili ezintathu umvelisi kunye mveliso | Uqalo olude
Ihowuliseyili yesimanje bamboo enamavili ezintathu-umaleko yezihlangu yokubeka
【I-Premium yendalo rack yeplanga yezihlangu ezenziwe ngomthi ezenziwe zii-phyllostachys pubescens ezivela kwintaba ephakamileyo ezinzileyo kunye nokuqina ngelixa kuqinisekiswa ukungunda kunye nokufuma ngokucoca kwendalo ngaphezulu.
Umsebenzi oMhle】 Une-laminate kunye neekona ezikhanyisiweyo ukunqanda ukubetha esandleni sakho; Ukuphuculwa kwesakhelo sohlobo lwe-X kunye noyilo lwebhaksi ngaphandle kokugungqa
【INkulumbuso yendalo】Ingubo yezihlangu zomthi ezenziwe zii-phyllostachys pubescens ezivela kwintaba ephakame ezinzileyo kunye nokuqina ngelixa kuqinisekiswa ukungunda kunye nokufuma ngombono wendalo ngaphezulu.
Umsebenzi oCokisekileyo】Nge-laminate kunye nekona etshisiweyo ukunqanda ukuhlaba isandla sakho; Ukuphuculwa kwesakhelo sohlobo lwe-X kunye noyilo lwebhaksi ngaphandle kokugungqa
Umququzeleli osebenzayoUkusebenza kungekuphela nje njengesihlangu, kodwa kunye neencwadi, ukutyala imbiza njlnjl.
Uyilo oluphathekayo, ukufakelwa kwamalungu angama-Zero kunye noyilo olusongekayo lokugcina ixesha lakho ekubekeni, amandla e-Mega, umthi wezihlangu ezinamaleko ama-3 anelisa iimfuno zakho zemihla ngemihla.
Material Izinto eziphezulu zoMgangatho】 Le ngxowa yezihlangu yenziwe nge-bamboo yendalo eyi-100%, izinzile, yomelele, ayiyityhefu kwaye ine-Eco-friendly.
Ufakelo olulula】 Akukho zixhobo zokufaka ziyafuneka, kwaye akukho zixhobo zinzima. Vele uvule indawo yokugcina izihlangu ukuze uyisebenzise. Elula kunye nokonga ixesha.
Intle kwaye iyenzeka】 Iroli yezihlangu ingabekwa egumbini, kwigumbi lokuhlambela okanye kwipaseji. Ayisiyiyo kuphela into yokuququzelela izihlangu, iincwadi okanye izityalo ezinamanzi, kodwa kunye nokuhonjiswa kwegumbi.
【Iintlobo ngeentlobo zezitayile】 Irock yezihlangu inemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu, ungakhetha indawo yokubeka izihlangu oyifunayo ngokwesitayile segumbi.
Ubungakanani 600 * 316 * 625mm
Umbala Umbala wendalo
Ubungakanani beCarton 1PC / CTN 775 * 615 * 70mm
Umhla wokuzisa Kwiintsuku ezingama-60 emva kokufumana intlawulo yedipozithi
Ilogo LOGO ngentando yakho
Yenziwe ngoqalo olusemgangathweni ophezulu luqinisekisa ukuhlala kwalo. Ingasetyenziselwa ngaphakathi nangaphandle kwibhalkoni, kuba umphezulu owomeleleyo owomeleleyo onesinyithi.
Amanqanaba eslat afaneleke kakhulu kuzo zonke iintlobo zezihlangu kwanezithende eziphakamileyo. Ayisiyiyo kuphela irock yezihlangu kodwa kunye nendawo yokugcina izinto ukulungiselela yonke into oyifunayo, ukugcina indlela yakho yokungena, ikhabethe, igumbi lokulala, ipatio, igumbi lodaka kunye negaraji kude nobumdaka.
Egqithileyo Umgaqo kaloliwe wethambo olonyuswe ngodonga ugqibelele kwigumbi lokuhlambela
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu we-Eco-Friendly Bamboo Stackable Shoe Rack
Umgangatho ophezulu we-Eco-Friendly Bamboo Stackable Sho ...